Inona ny fahatsiarovana anao amin'ny telefaona ampahibemaso? -News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Inona ny fahatsiarovana anao amin'ny telefaona ampahibemaso?
Fotoana: 2020-12-02 Hits: 4
Xianglong dia manome kojakoja fampiasa an-tarobia manokana sy serivisy tokana ho an'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny fampandrosoana 15 taona, azontsika atao ny manamboatra fonon-tanana, keypad ary fandraka tsy miankina amin'ny mpanjifa ho haingana. Taking to provide reliable, delicate industrial and military keypads and telephone handsets is ny iraka ampiasain'ny orinasanay, mifantoka amin'ny ho mpitarika manerantany amin'ny keypad indostrialy sy ny fifandraisan-davitra izahay!
Ho an'ny antsipiriany bebe kokoa. tongasoa eto aminay eamil na fanontanina ao amin'ny www.yyxlong.com. Vonona foana izahay handresy tetik'asa ho anao!
Next: Oviana ary taiza no novolavolaina ireo telefaona vonjy maika teo an-dàlambe?